I-Ubuntu Software Center, manje ekuwebhu | Kusuka kuLinux
I-Ubuntu Software Center, manje ikuwebhu
Kancane kancane izinhlelo zokusebenza zifakwa kuwebhu ngoba ngokwalokho abakushoyo, ikusasa likuyo "Ifu"; into engingavumelani ngayo, kepha hheyi.
Ngokwethulwa kwe Ubuntu 11.10 abafana be I-Canonical basimangazile nge Ukuvakasha okuku-inthanethi, lapho esingasebenzisa khona ngokuyisisekelo Unity kuwebhu. Ingabe manje Isikhungo Sesoftware ofinyelela kubasebenzisi ngesiphequluli:
Angikwazi ukukhuluma okuningi ngezimpawu zayo ngoba njengoba ngingasebenzisi Ubuntu, futhi angikwazi ukuthola ulwazi oluphelele ngokusetshenziswa kwayo, kepha ngayo, singathola zonke izinhlelo zokusebenza ezitholakalayo ze- I-Oneiric, Natty, Maverick y Lucid. Uma ungumsebenzisi we Ubuntu Uzoba nenketho yokufaka kusuka kuwebhusayithi efanayo futhi uma ungekho, njengoba kunengqondo kuzokusikisela ukuthi uyifake leyo distro.
Njengoba ukwazi ukubona esithombeni, izinhlelo zokusebenza ziqukethe incazelo, ukuthwebula kwayo, izilinganiso ezinikezwe abasebenzisi futhi, ngokumangazayo, kuyashesha kakhulu kunenguqulo yedeskithophu, kunjalo, kulabo abanomkhawulokudonsa omuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Ubuntu Software Center, manje ikuwebhu
Ngokusobala ifu linezinto ezinhle kepha mina uqobo angizange nje ngikholwe, iqiniso lokuthi idatha yakho yomuntu siqu isezandleni zomunye likwenza kucace bha, manje uma kukhona ifu eliyimfihlo enkampanini yakho elinokulawulwa okuthile nokuqinisekisa ukuthi selivele likhona enye into, yilokhu engikucabangayo, Sanibonani.
Haha yini ama-pringaos, abona ukuthi amanye ama-distros alula kanjani futhi aheha abasebenzisi, ukuwalungisa basusa isikhungo sesoftware ngezaba ezithengwe kumaShayina hahahaha.
$ huttlegates, uyazi, IGALIKI NAMANZI
Kepha ngifunde ukuthi ngaphandle kwe-Debian noma okufakiwe kwayo kufakiwe. Ingakufakela amaphakheji.
Mhlawumbe kuyisixazululo kuLubuntu nakwamanye ama-desktops angenaso isikhungo se-software esinjenge-gnome's. Ngicacisa ukuthi kukhona inguqulo kaLubuntu, kodwa yimbi kakhulu.
Futhi khumbula ukuthi iCanonical ifuna ukungena emakethe yamathebulethi nama-smartphone futhi uma sikuhlanganisa ne-PayPal, ngicabanga ukuthi esinye isinyathelo esiya emakethe yayo: p
esinye isinyathelo esiya emakethe yakho
Nginokungabaza ngokusebenza kwayo: Ingabe izothatha isikhundla se-SC ejwayelekile noma izomane ibe ngenye indlela kuyo? Ingabe inguqulo yewebhu ye-SC izowuhlanganisa amakhosombe avela eceleni umuntu anquma ukuwafaka noma izogxila kumakhosombe asemthethweni? irekhodi noma lizohlotshaniswa ngqo ne-akhawunti yomsebenzisi? Futhi ekugcineni, ingabe kuzoba nethuba lokusebenza njengomlando osiza ukufakwa kwawo wonke amaphakeji abenawo ngesikhathi esithile uma kwenzeka udinga ukubuyisela uhlelo?
Uma noma ngubani enemibono noma imininingwane ngakho, ngethemba ukuthi ngingabelana ngakho.
Uhlobo lwe-Repoman 1.3 luyatholakala